Rajadii Gaalkacyo oo fashilka mashruuca jidka Garoowe-Gaalkacyo la galgalanaysa (dhegayso) – Radio Daljir
Rajadii Gaalkacyo oo fashilka mashruuca jidka Garoowe-Gaalkacyo la galgalanaysa (dhegayso)
Seteembar 9, 2018 3:07 b 0
Magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug waxaa waayahaan rajo u ahaa rajada jidka Garoowe-Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo oo rajay rajobeel ah noqotay tan iyo doorashadii Madaxweyne Faroole, kana qaday badanaa mashaariicda hormarinta Puntland ayaa hadda waxaa soo foodsaaray rajobeel tii ugu xumeyd, kaddib markii dowladda Jarmalka oo xisaabi-xil-maleh ku qaadday mashruuca ay soo saartay war saxaafadeed aan hore looga baran deeqbixiyayaasha, ayna ku laalayso mashruuca hormarinta gobolka Mudug ee loo yaqaan jidka Garoowe-Gaalkacyo.
War saxaafadeedka ayaa lagu faahfaahiyey in “dowladda Jarmalku ay xal raadisay si loo soo afjaro khilaafka sii xoogeysanaya, xumeeyeyna xiriirkii fuliyayaasha mashruuca. Sidaas darteed Safaaradda Jarmalka iyo hay’adda GIZ waxa ay aad isugu taxalujiyeen in khilaafka xal laga gaaro, si loo suurtagaliyo helitaanka taageeraha dibadeed ee loo baahanyahay, mashruucuna uu u fulo. Nasiibdarro taasi marnaba ma ay suurtoobin. Sidaas darteed waxaa lagamamaarmaan noqotay in iskaashigii u dhexeeyey hay’adda GIZ ee dowladda Jarmalka iyo Hay’adda Jidadka Puntland (PHA) la laalo. Laalitaanka mashruuca Garoowe-Gaalkacyo waxaa lala socodsiiyey Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), sidoo kalena waxaa lagu wargaliyey Dowladda Puntland.”
Warbixinta war saxaafadeedka Dowladda Jarmalka waxaa inoo haya Maxamed Lakiman, Daljir Gaalkacyo.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 465 Wararka 18258
Fashilka wadada Garoowe-Gaalkacyo iyo falceliska darawalada iyo gaadiidleyda (dhegayso)